Aluminium Basa Platform Vagadziri & Vatengesi | China Aluminium Basa Platform Fekitori
Aluminium yemuchadenga basa chikuvaibasa rekumira basa remuchadenga basa riine huremu hwakareruka izvo zviri nyore kufamba.Pane akawanda modhi anokupa iwe kuti usarudze, imwe chete mast aluminium yemuchadenga basa chikuva, hunyambiri mast aruminiyamu basa remuchadenga chikuva uye wega unozvifambisa wega mhando aluminium yemuchadenga basa chikuva. Iyo michina inotora yakakwira-simba aruminiyamu alloy profiles kuti inyatso kudzora iyo yekusimudza kukanganisa uye kusvetuka.
Single Mast Aerial Work Platform ine Compact mamiriro, inogona kupinda yakamanikana nzira; yakakwirira-simba aruminiyamu chiwanikwa chimiro, kurema uremu, yakasimba simba, yakadzikama vachisimudza, hapana akarembera mitsetse, zvinokambaira jitter, hapana kujairika ruzha;
Pamusoro peyechete-mast aruminiyamu yemuchadenga yebasa chikuva, iyo mbiri mast aruminiyamu chiwanikwa emuchadenga basa chikuva inowedzera tafura yepamusoro uye inokwidza kukwirira kwepuratifomu, kuitira kuti ikwanise kujairana neakakwira emuchadenga mashandiro.
Yakakwirira Kugadziridza Dual Mast Aluminium Aerial Work Platform ine zvakawanda zvakanaka. .
Yakakwirira Kugadziridza Imwe Mast Aerial Basa Platform ine akawanda mabhenefiti, Four Outrigger Inopindirana basa, Deadman chinja basa, yakanyanya kuchengetedzwa kana mashandiro, AC simba papuratifomu yemagetsi ekushandisa maturusi, Cylinder Kubata Valve, anti-kuputika basa, Standard forklift gomba re nyore kurodha. .....
Manual Kusimudza Aluminium Aerial Work Platform iri nyore, isina huremu uye nyore kufamba. Inoenderana nekushandisa munzvimbo yakamanikana yekushanda. Mushandi anogona kuifambisa nekuishandisa. Nekudaro, iwo mutoro wekugona wakaderera uye unogona chete kutakura zvakapfava nhumbi kana maturusi. Unoda vashandi kuti vasimudzire mudziyo ku .....
Inotora yakakosha hydraulic unit, ine cartridge vharuvhu, uye nechimbichimbi kudzikisa basa. Yemhando yega yega inogona kuve yakagadzirirwa bhatiri simba zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Tora yakazvimiririra yakasanganiswa yemagetsi unit, yakashongedzwa nekudzivirira kwekudonha uye kuwandisa kudzivirirwa. Iyo michina yakagadzirirwa maviri akazvimirira ekudzora mapaneru kuitira kuti vashandi vagone kudzora michina zvisinei kuti vari pachikuva kana pasi. Uye zvakare, isu tinofanirwa kusimbisa kukurudzira kwedu pachedu propelled aluminium basa chikuva. Vashandi vanogona kudzora zvakananga kufamba uye kusimudza kwemidziyo iri patafura. Iri basa rinoita kuti inyatsoita basa kana uchishanda mudura uye inochengetedza nguva yekushanda yekuvhura nekuvhara makumbo.